UGAAR AH RAGGA: 3 Sabab Oo Gabadha Ay Kugu Nici Karto - Aayaha
Waxaan idiin soo gudbineynaa qodobo xasaasi ah oo ka kooban 3 isla markaana loo baahanyahay inaad iska ilaalisaan ragoow haddii aad mustaqbal ka dooneysaan haweenkiina.
Beenta & raaligelinta badan
Been, been, raali gelin iyo raaligelin tiro badan — markaadan ahayn qof toosan oo aanad daacad u ahayn lamaantiisa, waxaad siisay sabab ay kugu nacdo. Sababtana waxay tahay ma jiro qof raba inuu xiriir lasii lahaado qofaan daacad ahayn.
Dadka gaar ahaan haweenka waxay rabaan inay ogaadaan dhaqankaaga marka ay xiriir kula leeyihiin, haddii ay ogaadaan inaad tahay qofaan fur furneyn isla markaana aan daacad ahayn meeshaas ayay kaaga dhaqaaqayaan.
Markaad lugaha la gasho xiriir dhaba waa inaad aamin noqotaa, meel iska dhig qiyaano. Sababtoo ah qofkaad xiriirka la yeelatay ama aad guursatay waxaad u ballan qaaday daacadnimo iyo inaadan qiyaaneyn.
Inaad ka hortimaado ballamihii aad qaaday waa xushmad darro weyn iyo adigoo qof aanan jirin oo kale kasoo qaaday lamaantaada, balse haddii ay ogaato inaad qiyaaneyso waxay uga jawaabi doonta sida la habboon iyadoo ay u badantahay inay ku nacdo.
Waxaa tahay qofaan caradiisa xakameyn karin
Haddii aad tahay nin haweenka garaaca ama nooca aanan caradiisa xakameyn Karin aadna u qeyliya, ama kan markii uu caroodo wixii gacantiisa ku jira tuusa waxaa tahay nin halis badan — ma jirto haweeney rabta nin noocaas.